KAOMININA TOAMASINA : “Mitohy ny asa fampandrosoana ny tanàna”, hoy i Elisée Ratsiraka
Mbola resabe hatrany ny raharaha fampiatoana ny Ben’ny tanànan’i Toamasina, Elisée Ratsiraka, izay naaton’ireo mpikambana ao amin’ny filan-kevitra kaominaly. 10 avril 2017
Ankehitriny, mivoaka tamin’ny fahanginany ny Ben’ny tanàna MAPAR ity manoloana io resabe io. Nambarany tamin’izany fa : “mbola mandamoaka ny hatreto ny fikasan’ireo filan-kevitra kaominaly hampiato ny tenako amin’ny asako. Misy ihany mantsy resaka tsy mitombina amin’ireo antony hampiatoana ahy amin’ny asako. Tany tan-dalàna i Madagasikara ary misy rafitra sy ambaratongam-pahefana vao tonga amin’izany fampitoana izany”.
Manamafy ity Ben’ny tanàna ity fa : “tsy mbola nanamafy io fanapahan-kevitry ny filan-kevitra kaominaly io ny ministera mpiahy. Mazava loatra, miakatra birao toy ny andavanandro ny tenako ary mitohy hatrany asa mahazatra sy ny asa fampandrosoana atao eto Toamasina”. Manamafy ny tenany fa misy ihany ny endrika tsy fitiavana amin’ny maha-olombelona an’io fanapahan-kevitry ny filan-kevitra kaominaly io. Tsy tokony hafangaro, hoy izy, ny raharaha fampandrosoana ny tanàna sy ny tsy fankahakana olona iray. Tombontsoam-bahoaka no katsahina fa tsy tombontoan’ ny tena manokana na koa kajikajy politika.
“Misy amin’ireto lohandohan’ny mpisorona amin’ny mpanolotsaina kaominaly ireto no kandidà nifaninana tamin’ny fifidianana izay ho Ben’ny tanàna kanefa tsy lany. Lasa tsy maty voalavo an-kibo noho izany izy, ka manao ny fomba rehetra haminganana ahy”, hoy hatrany ny fanazavana azo. Raha ny loharanom-baovao iray azo dia misy amin’ireo mpanolotsaina kaominaly ireto tokoa no mikendry ho na filohan’ny delegasiona manokana na PDS raha toa ka afaka amin’ny toerany tokoa ny Ben’ny tanàna. Andrasana, araka izany, izay fivoaran-draharaha.